GXT 590 Bosi Bluetooth bụ Trust ọhụrụ gaminggba Cha Cha njikwa n'ihi na gam akporo na Windows | Akụkọ akụrụngwa
GXT 590 Bosi Bluetooth bụ onye ntụkwasị obi na-egwu egwuregwu gam akporo gam akporo na Windows
Mgbe ọ na-abịa ịnụ ụtọ egwuregwu anyị kachasị amasị site na ama anyị, dabere na ụdị egwuregwu ọ bụ, n'ezie anyị nwere A na m atụ uche ọ aụ inwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu ọ na-enye anyị na-enweghị ịlụ ọgụ n'oge niile na ihuenyo nke ngwaọrụ anyị.
N'ahịa, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị njikwa iji nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu anyị kachasị amasị na Windows na gam akporo, iOS na Mac. N'ụzọ dị mwute, ndị njikwa niile dị na ahịa, ha adabaghị na nyiwe niile, yabụ mgbe ịzụrụ ya, anyị ga-eburu n'uche usoro nyiwe anyị ji.
Ọ bụrụ na ị na-eji gam akporo na Windows ama na desktọọpụ PC gị mgbe niile. Tụkwasịrị Obi na-enye anyị njikwa GXT 590 Bosi Bluetooth, Onye na-egwu egwuregwu iji nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu anyị nwere mmasị na PC ma ọ bụ gam akporo ama anyị ma ọ bụ mbadamba ihe dị ka awa 30 na-enweghị nkwụsị.
Iwu a nyere anyị 13 nzaghachi nzaghachi, bọtịnụ 2 na-akpali akpali na-akpali akpali, 2 analog joysticks na 8-way digital panel, yana nkwado iji debe ekwentị ma nwee egwuregwu dịka a ga - asị na ọ bụ njikwa egwuregwu egwuregwu vidiyo. Nke a dịpụrụ adịpụ dị mma maka egwuregwu ụgbọ ala, nyiwe, egwuregwu shooter ...
Ntụkwasị obi na-etinye GXT 590 Bosi Bluetooth nke arụmọrụ dị elu maka ndị egwuregwu kachasị achọ iwu a maka naanị euro 49,99, iwu na anyị nwere ike iji doro anya na Windows PC ma ọ bụ na gam akporo-jikwaa ama. Ọ bụrụ na kọmputa anyị bụ Mac ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nwere iPhone, ihe na-agbagwoju anya, ebe ọ bụ na ụdị a adabaghị na ikpo okwu Apple, yabụ a ga-amanye anyị ịbanye na njikwa njikwa nke ụlọ ọrụ Nimbus nyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » GXT 590 Bosi Bluetooth bụ onye ntụkwasị obi na-egwu egwuregwu gam akporo gam akporo na Windows
Konami tụfuru Njikọ Njikọ maka PES, egwuregwu vidio ahụ gbadata ma na-enweghị brek